ऊर्जा Archives - Halkara News
ऊर्जामा माओवादी नेतृत्वले गरेको सार्थक प्रयास, २५ लाख घरधुरीले यसरी पाए प्रत्यक्ष राहत
काठमाडौं । जब जब माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन हुन्छ वा संयुक्त सरकारमा माओवादी सहभागी हुन्छ, त्यतिबेला केही न केही महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन्। नेपालको संविधानले नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ। सोही आधारमा सबै नागरिकले राज्यबाट समान रुपमा सेवा र सुविधा पाउने वातावरण तयार पारेको छ। अघिल्लो पटक माओव...
ऊर्जा क्षेत्रमा सशक्त टीम ल्याएर नेपालबाट लोडसेडिङ हटायौं- प्रचण्ड
चितवन । सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा चितवनको राप्ती नगरपालिका–६ स्थित हर्दीमा निर्माण भएकोे पूर्वी चितवन १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनको उद्घाटन गरिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार हर्दीमा आयोजित कार्यक्रममा सबस्टेसनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। चितवनका राप्ती, खैरहनी र कालीका नगर...
लक्ष्मीपूजाको दिन ऊर्जामन्त्री पुन भारप्रेषण केन्द्रमा
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आज (शनिबार) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्युचाटारस्थित भारप्रेषण केन्द्र (एलडिसी) पुगेर देशभरको विद्युत माग र आपूर्ति अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका छन्। शनिबार साँझ देशभरको विद्युत आपूर्तिको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष निरीक्षणका लागि मन्त्री पुन प्राधिकरणका कायममुकाय...
बागलुङ । बागलुङ जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकामा धमाधम जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। सयपत्री जलविद्युत निर्माण सम्पन्न भएको ताराखोलामा हालै ताराखोला जलविद्युत आयोजना ३८० किलोवाट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले ताराखोलामा पुनः ठूला परिमाणमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित चार ठूला आयोजना सञ्चालनको तयारी थालिए...
१२ सय मेगावाट विद्युत आयात निर्यात गर्न सक्ने देशकै ठूलो सवस्टेशन निर्माण
काठमाडौं । नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सबस्टेशनको रुपमा परिचित ढल्केबर सबस्टेशन नो लोडमा चार्ज भएको छ। कूल ४०० केभी क्षमताको सो सबस्टेशन गत बुधबार साँझदेखि नो लोडमा चार्ज भएको हो। ढल्केबर सबस्टेशन आयोजनाका प्रमुख शुक्र देवकोटाका अनुसार देशकै सबैभन्दा ठूलो पावर हवको काम सम्पन्न भएको छ। उक्त सबस्टेशन नेपालको विद्य...
अर्को वर्ष पनि विद्युत शुल्क घटाउने ऊर्जामन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरी नीतिगतरुपमा आवश्यक तयारी गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले काम शुरु गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज (मंगलबार) कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको हो। मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ १९ को बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश...
प्राधिकरणमा कुलमानका चार वर्षः झण्डै डुबेको संस्था खूद नाफामा
काठमाडौं । नेपाल सरकारका सार्वजनिक संस्थानमा को कसले राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउँछ भन्ने कुराको चासो आम मानिसलाई हुँदैन। ती संस्थामा पुग्ने मानिस कोही चर्चाको शिखरमा पुग्ला वा नपुग्ला त्यो कर्मले निर्धारण गर्दछ। नागरिकलाई सेवा दिने लक्ष्यका साथ सरकारले स्थापना गरेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानले जनतालाई सेवा दिएको र नाफा क...
विद्युत प्राधिकरणबाट बिदाइ हुँदा भावुक हुँदै के भने कुलमान घिसिङले? (सम्बोधनको पूर्णपाठ)
नेपाल सरकारले २०७३ साल भदौ २९ गते मलाई ४ वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र मबीच प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकांकहरु तयार गरी कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता...
किन रोकियो विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति ?
काठमाडौं । सर्वत्र चासोका रुपमा हेरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको पुनःनियुक्तिबारे सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरेको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यसूचीमा नपरेको बताइएको छ। सोमबार बेलुकी अबेर सकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबा...
सकियो कुलमान घिसिङको कार्यकाल, सरकारले फेरि घिसिङलाई नियुक्ति गर्ला ?
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिएको छ। चार वर्षे कार्यकालको रुपमा २०७३ भदौ २९ गते घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। उनको ४ वर्षे कार्यकाल पूरा भएसँगै अबको कार्यकारी निर्देशक को हुन्छ भन्ने आम चासो जागेको छ। सामाजिक सञ्जालमा घिसिङलाई थप ए...